कृष्णबहादुर महरा – ताजा समाचार
Tag: कृष्णबहादुर महरा
गत १२ असोजमा महरालाई संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेको आरोप लाग्यो । १३ असोजमा रोशनीले महराविरुद्ध बोलेको भिडियो सार्वजनिक भयो । भिडियो सार्वजनिक भएपछि १४ असोजमा सत्तारुढ नेकपा सचिवालयले सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन महरालाई सुझाव दियो । त्यही दिन साँझ महराले राजीनामा दिए । उनको राजीनामा पत्रमा उल्लेखित […]
महरा जेलबाट छुट्दा डिल्ली बजारमा ‘एमसिसी मुर्दाबाद’को नारा
काठमाडौं। ज’वरज’स्ती क’रणी उद्योगम मुद्दामा तीन महिना भन्दा बढी थुनामा बसेर पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा सोमबार रिहा भएका छन्। सोमबार अपरान्ह उनी डिल्ली बजार कारागारबाट छुट्दा सयौँ शुभचिन्तक जम्मा भएका थिए। कारागार भित्रबाट बिदाइ भएर निस्कँदा उनलाई प्रहरीले कडा सुरक्षा दिएको थियो। महरालाई प्रहरी सुरक्षामा जेलबाट निस्कदा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको विपक्षमा नाराबाजी भएको […]
आजको संयोग : पूर्वसभामुख महरा जे लबाट छुट्दा पूर्वउपसभामुख तुम्बाहाङफे बनिन् मन्त्री
व्यवस्थापिकाका दुई पूर्व उच्च पदस्थको हकमा संयोगवश सोमबार अनौठो घटना भयो। संयोग कस्तो भने पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले ज व र जस्ती क र णी उद्योग मु द्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाउँदै गर्दा उनकै कार्यकालकी पूर्वउपभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गरिन्। संसदमा दुई पूर्व उच्च पदस्थमध्ये एक महराले ज व […]
रोशनीको बयानको आधारमा अदालतले छाडिदियो महरालाई, के थियो बयानमा?
संसद सचिवालयकी कर्मचारीलाई ब ला त्का र गरेको अभियोग लागेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ। संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीले उक्त दिन महरा आफ्नो कोठामा नआएको बयान दिएपछि अदालतले मुख्य आधार यसैलाई बनाएर महरालाई सफाइ दिएको हो। महराले पनि उक्त दिन रोशनीको कोठा तीनकुने नगएको बयान दिएका थिए। ‘उनी (महरा) […]
अदालतले क्लिन चिट दिएसँगै महराको सांसद पद निलम्बन फुकुवा, सेवा सुविधा पाउने
जवर जस्ती करणी मु द्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सफाइ पाएसँगै पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदको सेवा सुविधा फुकुवा हुने भएको छ। गत असोज १२ गते संसद सचिवालयकै कर्मचारीमाथि बला त्का र प्रयास अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि जे ल चलान भएका महराको सांसद पद पनि पुनर्स्थापित हुने भएको छ। संसद नियमवाली अनुसार तीन वर्ष भन्दा बढी कै […]
कृष्णबहादुर महरालाई ब’ला’त्कार मु’द्दामा सफाइ
काठमाडौं जिल्ला अदालतले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ब’ला’त्कार मु’द्दामा सफाइ दिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमरराज पौडेलको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो । सं‌सद सचिवालयकी कर्मचारीलाई ब’ला’त्‍कार प्रयास गरेको आ’रोपमा महरामाथि मु’द्दा लागेको थियो । यसअघि काठमाडौं जिल्‍ला अदालतले महरालाई कसूरदार होइन भन्न नसकिने भन्दै पुर्पक्षका लागि थु’नामा पठाएको थियो । महरालाई डिल्लीबजार कारागारतर्फ […]
एमसिसि बहसपछि पुर्व सभामुख महरालाई भेट्नेको लर्को, भन्छन्: ‘महरा लाई फसाइयो’
काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसिसिबारे सर्बत्र बहस चलिरहँदा एमसिसि संसदबाट पारित गराउन नचाहेको आरोप लागेका पुर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा यतिवेला अर्कै अभियोगमा कारागारमा छन् । यस्तो छ कारागारमा महराको दैनिकी’ शीर्षक दिएर नागरिकले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको कारागार दैनिकी उतारेको छ । नागरिकका अनुसार गत कात्तिक २५ गतेदेखि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका उनलाई भेट्न जानेहरूको लर्को नै […]
बला-त्कार प्रयासको आरोपमा डिल्ली कारागारमा रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी पारित भए नेपालमा अमेरि-की से-नाले प-रेड खेल्ने बताएका छन् । –अनलाइनसँगको कुराकानीमा पूर्वसभामुख महराले एमसीसी इ-न्डो प्यासि-फिक स्टाटेजीभित्रकैं अं-ग भएको समेत बताएका छन् । महराको भनाई छ – ‘हेर्नुस् एमसीसीभित्र विकासको कुरा मात्रै छैन । अन्य कुराहरु पनि छन् । त्यो रोक्नु पर्छ । त्यो […]
महरा भेट्न कारागार किन पुगे बाबुराम ?
काठमाडौं । यौ-न दुरा-चारको अभि-योगमा पु-र्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारा-गार चलान भएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भेटेका छन् । सोमबार दिउँसो कारागार पुगेका भट्टराईले महरालाई भेटेका हुन् । स्रोतले जनाएअनुसार भट्टराईले महरासँग करिब १ घण्टा गो-प्य कुराकानी गरेका थिए । दिउसो ३ बजे का-रागार पुगेका भट्टराईले ४ बजेसम्म महरासँग […]
एमसीसीबारे महराले कारागारबाटै मुख खोले, सम्झौताबारे गरिदिए यस्तो ड’रलाग्दो खुलासा
काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे नेपालमा अहिले निकै विवाद देखिएको छ । तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वले गरेको उक्त सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अहिले विवाद देखिएको हो । सत्तारुढ दल र सत्ताबाहिरका दलले पनि एमसीसी सम्झौताबारे फरक–फरक धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसैबीच एमसीसी सम्झौता संसदबाट रोक्न खोजेकै कारण पूर्वसभामुख […]
महरा एकाबिहानै कैदी बन्दीलाई भन्छन्– उठौं साथी उज्यालो भइसक्यो !
निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई जबरजस्ती करणी प्रयास गरेको अभियोगमा कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि जेल चलान भए । जिल्ला अदालत काठमाडौंले महरालाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश दिएको थियो । बन्दीका रुपमा महराले जेल जीवन बिताइरहेका छन् । जेल अन्य भीआईपी कैदीबन्दीभन्दा महराको दिनचर्या सामान्य रहेको डिल्लीबजार कारागार सदरखोरकी शाखा […]
मेरो नजरमा आलम निर्दोष छन्, महरालाई फसाएको जस्तो लाग्छः नेता सिटौला
ताजा समाचार । २१ कात्तिक, काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले इटा भट्टामा जिउँदै मान्छे जला एर मा’रेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका पार्टीका निलम्बित सांसद मोहम्मद अफताम आलम निर्दोष रहेको जिकिर गरेका छन्। पत्रकार श्रीराम पौडेलको अन्तर्वार्तामा नेता सिटौलाले आलममाथिको अभियोग अविश्वसनीय भएको टिप्पणी गरे । ‘मलाई उहाँ (आलम)ले त्यत्रो जघ’न्य अप’राध […]